Yokukala wamanje - kusho ukuthini?
Kusukela lapho sizalwa futhi kukho konke ukuphila sizungezwe basebenzise izinto zikagesi. Lezi zihlanganisa: zasendlini, babasa emakhaya ethu kanye nasemigwaqweni, izindlela zokuxhumana mobile, izimoto ngisho lanamuhla lihamba ugesi. Zonke lezi amadivaysi kudla ugesi, abanye niwayise kusukela amapayipi, abanye usukele amabhethri nama-accumulator, futhi ezinye ehlukile imithombo energy ( "windmills", ama-solar panel, njll). Futhi abantu abaningi bazi ukuthi yini yokukala ka amandla zamanje, nokuthi kuyinto kagesi? Kulesi sihloko thina sizophendula le mibuzo.
Ake uqale nge nemiqondo eyisisekelo. Electrocution ngokuthi ohlangothini ngaphambilini ezinyakazayo e wokuba umbhidisi izinhlayiya icala. Cabangela izimo zaba khona wamanje:
khona-electron khulula e umqhubi insimbi;
khona inkambu kagesi (Ilenkundla elakhiwe ngenxa umthombo yamanje).
Manje cabanga into efana zamanje nesilinganiso iyunithi. Lokhu value scalar luchazwa nge incwadi I. Ukunqunywa Latin zamanje icala isilinganiso wenziwa amayunithi q, edabula Ingxenye evundlile umqhubi sensimbi ubude besikhathi t, ngesikhathi lapho i kagesi badabula umqhubi. Ngakho, ifomula simiswe ngalendlela lelandzelako: Mina = q / t. Yamanje nesilinganiso iyunithi sikhombisa icala siyodlula esiphambanweni ingxenye wire iyunithi isikhathi ngasinye.
Kuyinto pretty elula. Manje cabanga ngalokho kukhona ezivamile zamanje amayunithi. Kuyinto ngokwanele ukubheka ohlelweni lomhlaba wonke amayunithi (SI). Ngakho-ke lapha ukuthi iyunithi samanje ngesilinganiso - Ampere. Le yunithi Lethiwa physics French nesazi sezibalo u-André-Marie Ampere (1775-1836). Wethula lafana electrodynamics, electrostatics, solenoids, EMF, galvanometer, kagesi wamanje, voltage , nabanye. Scientific AM Ampere for ukubikezela okuvela kuyo isayensi ezifana "cybernetics", uye waba iphayona nokuxhumana mechanical nge babashayeli kagesi lamanje futhi yethulwa umthetho sokunquma izinkomba kwe-current.
Manje zama ukuqonda leli qiniso ngokombono physics aphansi. Ngenxa yalesi kubalulekile ukugqamisa izakhiwo ukugeleza kagesi ngokusebenzisa babashayeli ezimbili ngokulinganisa. Uma izinhlayiya icala lihamba ku izintambo ezimbili kwelinye direction, abaqhubi ezinjalo uzobe ukhangwa, futhi uma izinhlayiya izoya bacondze etindzaweni letehlukene, babashayeli azothanda dudula nomunye. Iyunithi samanje eyodwa ampere ubhekwa ibutho lapho izintambo ezimbili okuhambisana imitha elilodwa ubude, ahlukaniswe ibanga imitha elilodwa, ngeke uxhumane 0,0000002N amandla.
Kufinyeta, sithi ulwazi umqondo ezifana amandla zamanje, kuyosisiza sithole ubungako bamandla sokudliwa zikagesi kagesi. Nale Kulula ukubala wiring umthwalo ekhaya lakho, futhi ngenxa yalokho, ukuvikela amakhaya abo kusuka umlilo noma ukulimala zikagesi, okuyinto ngokuvamile kwenzeka lapho ukusatshalaliswa okungalungile abendlu basebenzise izinto zikagesi.
Umshini wokuwasha LG E10B8ND: ukubuyekezwa, imiyalelo, izincazelo, izithombe
Ikhaya subwoofer asebenzayo: ukuxhuma, lungiselela, ikakhulukazi
Umshini wokuwasha "Candy": ngayinye ngokwamandla izidingo zakhe, yilowo nalowo muntu ngokomsebenzi amakhono akhe
I-Katscher Brovina - iyini futhi yikuphi ukusebenza kwayo okuwusizo? Indlela yokwenza i-Brovin?
Ingcindezi cooker Vitesse - Izibuyekezo ikhasimende
Iyini i-computer yakhe ehhovisi?
Indlela ngokushesha ukupheka ophaya okuzenzela ne apula, okuthosiwe epanini? iresiphi elula
Buciko eyala: umqondo, ukuphathwa kanye nekwendluliselwa ebangeni lelilandzelako.
Isithombe Petersburg enkondlweni "lethusi wehhashi" by Pushkin
Kusukela sizogqokani izicathulo ubude esithathwa abesilisa?
Isondlo sePlanethi: incazelo kanye nezici